Nde naịra abụọ (₦2m) maka nkwado ndị ntorobịa na Stanel Awka
Dọkịta Stanley Ụzọchukwu dụrụ ndị ntorobịa ezigbo ọdụ ka ha ghara ịda mba n’ime mmụọ ma gwa ha na e nwere ọtụtụ ndị nọ ebe ahụ dị njikere inye aka ma ọ bụrụ na ha bụ ndị ntorobịa dị njikere ịdị uchu ma rụsie ọrụ ike. O kwuru na atụmatụ a bụ maka ịkparịta ụbụbọ, ịdụ ọdụ na ịzụ ndị ntorobịa.
Stanel Youths Empowerment Master Class’ nke mbụ bụ n’afọ puku abụọ na iri na itolu (2019) ka e mere ya. Mmemme nke chịkọtara ọtụtụ ndị isochei azụmaahịa tinyere ndị isi ụlọ ọrụ dị iche iche bụ ndị bịara inye aka zụọ ma dụọ ndị ntorobịa karịa puku mmadụ ise (5,000) ọdụ.
A na-atụkwa anya ọtụtụ ndị isioche azụmaahịa n’Ọka (Awka) ọzọ maka ịgwa ndị ntorobịa okwu. Ndị ga-ahazi isi okwu bụ ndị dị ka Dr Herbert Wigwe bụ onye isi ụlọ ọrụ Access Bank, Dr Cosmas Maduka bụ onye isioche Coscharis Group, Chief Clen Allen Onyema bụ onye isioche Airpeace nakwa ọtụtụ ndị ọzọ.
Agbụrụ, asụsụ na omenala Igbo ga-adị.
A gụọla ya ugboro 164
DJ Switch agbarụọla ihu maka mmachi azụmahịa ego Crypto